11/05/2018 - Page 3 sur 3 -
RN4- Andriba : Mpandeha dimy maty navadiky ny kamio
Namoizana ain’olona miisa dimy indray ny lozam-pifamoivoizana nateraky ny kamio, na irony antsoina hoe “car-andalana” irony ny alin’ny talata lasa teo tokony ho tamin’ny 11 ora tany ho any. Tany amin’ny lalam-pirenena fahefatra, teo amin’ny …Tohiny
Omaly vao maraim-be dia nisy nitoraka « cocktail Molotov » ny lampihazo tetsy amin’ny kianjan’ny 13 Mai. Olona roa nitaingina moto no fantatra fa nanipy izany, ary tavoahangina labiera niisa enina no natsipy rehefa avy …Tohiny
Ankoatrany France 24 dia ny gazety l’express.fr ao Frantsa indray no namoaka ny fanadihadiana vitany mikasika ny raharaha Mamy Ravatomanga, izay mpanolotsaina manokan’i Andry Rajoelina. Hisarihan’izy ireo ny mpamaky tamin’ny vaovao izay nivoaka ny faha- …Tohiny
« Fandemen-tsaina »
Firy moa ny malagasy maty nataon’ny mpanao politika sorona nandritry ny hetsika 10 aogositra 1991, 07 febroary 2009 nandroMbahana fahefana tamin’izany saingy mba inona moa no niova teto amin’ny firenena ? Ireo mpitari-tolona no nahazo …Tohiny